Iikholeji zaseNyakatho zaseDakota: Qhathanisa noMthetho weeNqaku zokuBala ukungena
Ukuqhathaniswa kobucala ngeCandelo leeKholeji zeeKholeji zaseNyakatho Dakota
Iikholeji ze-North Dakota neeyunivesithi zinika abafundi ithuba olubanzi lwezinto ezikhethwa kwiiyunivesithi ezinkulu zikarhulumente ukuya kwiikholeji ezincinci. Imigangatho yokwamkelwa ihluka kakhulu, ngoko ke itafile engezantsi inokukunceda ukuba ubone ukuba ngaba izikolo zakho ze-ACT zijoliswe kwisikolo esithile.
UMTHETHO Ulinganisa iikholeji zaseMntla Dakota (phakathi kwe-50%)
IDickinson State University 18 31 16 23 17 24
KwiYunivesithi yaseMayville State 18 23 16 23 17 24
University of Minot 18 23 19 25 17 24
KwiNyuvesi yaseNyakatho yeNtshona Dakota 21 26 20 25 21 27
Ikholeji yeBhayibhile yeZiqu zithathu 17 22 17 24 15 20
Yunivesithi yaseJamestown 20 25 18 24 19 25
KwiYunivesithi kaMariya 20 26 19 26 19 26
KwiYunivesithi yaseNyakatho Dakota 21 26 21 27 20 26
University of State City 18 24 16 22 17 24
Itheyibhile ibonisa amanqaku omsebenzi we-50% wabafundi ababhalisile. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, unesithuba esilungileyo sokwamkelwa. Ukuba izikolo zakho zincinci ngaphantsi kweenombolo eziphantsi, qaphela ukuba abafundi abangama-25% babenqaku elingaphantsi kwelabo babalwe.
Njalo gcina umThetho ngokufanelekileyo. Iirekodi eziqinileyo zemfundo kunye neengxaki zokulungiselela iikholeji ziza kuqhubeka zithatha ubunzima obukhulu kunamanani amanqaku ovavanyo. Kwakhona, ezinye zezikolo ziza kukhangela ulwazi olungabonakaliyo kwaye zifuna ukubona intsingiselo eyinqobileyo , imisebenzi enentsingiselo yexesha elichanekileyo kunye neencwadi ezilungileyo zinconywa .
Qaphela ukuba umThetho uthandwa kakhulu kuneSAT eMntla Dakota, kodwa zonke izikolo ziya kwamkela uvavanyo.
4 Izihluthulelo zokwenza izigqibo ezilungileyo
Ukubambezela phantsi kweNzuzo